इन्टरप्राइजमा WordPressका लागि केस बनाउने: पेशेवरहरू र विपक्ष | Martech Zone
इन्टरप्राइजमा WordPressका लागि केस बनाउँदै: पेशेवरहरू र विपक्षमा
शुक्रबार, जुन 24, 2016 मंगलवार, नोभेम्बर 24, 2020 Douglas Karr
WordPress.org इन्टरप्राइजमा बढ्दै छ, आजकल प्रत्येक प्रमुख उद्योगहरूमा प्रयोग भइरहेको। दुर्भाग्यवश, ठूला व्यवसायहरू अझै पनि वर्डप्रेसलाई बाइपास गर्छन् किनभने यसको प्रतिष्ठान सानो व्यवसाय वा स्वतन्त्र ब्लगि platform प्लेटफर्मको रूपमा छ। हालका वर्षहरूमा, समर्पित वर्डप्रेसले होस्टिंग प्रबन्धित गर्‍यो प्लेटफर्महरू विकसित भएको छ। हामी सर्‍यौं Flywheel लागि Martech Zone र परिणाम संग उत्साहित भएको छ।
इन्टरप्राइजमा WordPress को उपयोग गर्ने पक्ष र विपक्षहरू छन्। म वर्डप्रेस अनुभवलाई रेसि raसँग तुलना गर्दछु। तपाईंसँग कार (वर्डप्रेस), ड्राइभर (तपाईंको कर्मचारी), तपाईंको इन्जिन (विषयवस्तु र प्लगइनहरू), र तपाईंको रेसट्र्याक (तपाईंको पूर्वाधार) छ। यदि यी कुनै पनि तत्वहरूमा अभाव छ भने, तपाईंले दौड गुमाउनुभयो। हामीले धेरै ठूला कम्पनीहरु लाई एक WordPress माइग्रेसन र दोष WordPress को साथ असफल भएको; यद्यपि हामीले वास्तविक मुद्दा कहिल्यै देखेका छैनौं WordPress.
उद्यम को लागी WordPress को पेशेवरहरु
प्रशिक्षण - यदि तपाईंलाई कुनै सहयोग आवश्यक छ भने, WordPress.org सँग एक टन स्रोतहरू छन्, यूट्यूबसँग एक टन भिडियोहरू छन्, वेबमा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू छन्, र गुगलले लाखौं लेखहरूमा परिणाम दिन्छ। हाम्रो आफ्नै उल्लेख छैन वर्डप्रेस लेखहरूनिस्सन्देह।
सजिलो प्रयोग - जबकि यो अनुकूलन को लागी पहिलो पटक सरल नहुन सक्छ, सामग्री वर्डप्रेस उत्पादनको लागि एक स्न्याप हो। तिनीहरूको सम्पादक अविश्वसनीय रूपले मजबूत छ (यद्यपि यसले मलाई दु: ख दिन्छ कि h1, h2, र h3 हेडिingsहरू र उपशीर्षकहरूले अझै पनि कोडमा बनाएको छैन)।
संसाधनहरूमा पहुँच - अन्य CMS विकास श्रोतहरू खोज्नु वास्तविक चुनौती हुन सक्छ, तर WordPress संग तिनीहरू जताततै छन्। चेतावनी: यो पनि समस्या हुन सक्छ ... त्यहाँ धेरै विकासकर्ताहरू र एजेन्सीहरू छन् जुन WordPress भित्र अत्यन्त कमजोर समाधानहरू विकास गर्दछन्।
एकीकरण - यदि तपाईं फारमहरू थप्न वा वास्तवमै केहि एकीकृत गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं सामान्यतया पहिले वर्डप्रेसमा उत्पादित एकीकरण पाउनुहुनेछ। को खोजी गर्नुहोस् अधिकृत प्लगइन निर्देशिका वा साईट मनपर्‍यो घाटी कोड, त्यहाँ तपाईले फेला पार्नुहुने धेरै छैन!
अनुकूलन - WordPress 'विषयवस्तुहरू, प्लगइनहरू, विजेटहरू, र अनुकूलन पोष्ट प्रकारहरूले लचिलोपनको असीम मात्रा प्रस्ताव गर्दछ। WordPress गर्न कडा मेहनत गर्दछ एपीआई को श्रृंखला त्यो प्लेटफर्मको हरेक पक्ष समेट्छ।
उद्यम को लागी WordPress
अनुकूलन - WordPress हो राम्रो बक्स बाहिर जब यो खोज ईन्जिन अनुकूलन को लागी आउँछ, तर यो राम्रो छैन। उनीहरूले हालसालै साइटम्यापहरू तिनीहरूकोमा थपेका छन् Jetpack प्लगइनतर यो यत्तिको बलियो होइन योआस्टको एसईओ प्लगइनहरू.
प्रदर्शन - WordPress मा डाटाबेस अप्टिमाइजेसन र पृष्ठ क्यासिंगको अभाव छ, तर तपाईं सजिलैसँग व्यवस्थित WordPress होस्टको उपयोग गरेर यसलाई बनाउन सक्नुहुनेछ। मलाई स्वचालित ब्याकअप, पृष्ठ क्यासिंग, डेटाबेस उपकरण, त्रुटि लग र भर्चुअलाइजेशन कुनै पनि समाधानको आवश्यक पर्दछ तपाईंको सफलता सुनिश्चित गर्नका लागि।
अंतर्राष्ट्रीयकरण (I18N) - WordPress कागजातहरू कसरी तपाईंको विषयवस्तुहरू र प्लगइनहरू अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, तर प्रणालीमा स्थानीयकृत सामग्री एकीकृत गर्न क्षमता अभाव छ। हामीले लागू गरेका छौं WPML यसका लागि र सफलता थियो।
सुरक्षा - जब तपाईं वेबको २%% लाई शक्ति दिनुहुन्छ, तपाईं ह्याकि forको लागि ठूलो लक्ष्य हुनुहुन्छ। फेरि, व्यवस्थित होस्टिंगले स्वचालित प्लगइन र थिम अपडेट प्रस्ताव गर्दछ जब सुरक्षा मुद्दाहरू खडा हुन्छन्। म अत्यधिक बाल विषयवस्तुहरू निर्माण गर्न सिफारिश गर्दछु ताकि तपाईं आफ्नो समर्थित प्यारेन्ट थीम अपडेट गर्न जारी राख्न सक्नुहुनेछ तपाईंको साइट जोखिममा राख्नको लागि विषयवस्तु राख्नु हुँदैन जुन अपडेट हुन सक्दैन।
कोड बेस - थिमहरू प्राय: उत्कृष्ट डिजाइनको लागि विकसित हुन्छन्, तर गति, अप्टिमाइजेसन, र अनुकूलनको लागि परिष्कृत विकासको अभाव छ। यो समग्र आक्रामक हुन सक्दछ कसरी दुबै प्लगइन र विषयवस्तुहरू विकसित छन्। हामी प्राय: विषयवस्तुहरूमा बच्चाको विषयवस्तुहरू लेख्ने फेला पार्दछौं (बच्चाका विषयवस्तुहरू प्रयोग गर्ने अर्को कारण)।
ब्याकअप - WordPress ले सशुल्क समाधान प्रस्ताव गर्दछ, VaultPress अफसाइट ब्याकअपको लागि तर मँ छक्क परें कति कम्पनीहरूले महसुस गर्दैनन् कि यो कुनै बक्स बाहिर सुविधा छैन र तपाईंको होस्ट वा थप सेवा द्वारा प्रदान गर्न आवश्यक छ।
WordPress र मध्यम र ठूला आकारका व्यवसायको साथ अघि बढिरहेको छ, यहाँबाट केही तथ्या .्कहरू छन् Pantheon.
टैग: उद्यमउद्यम WordPressWordPressवर्डप्रेस कन्सWordPress पेशेवरहरूWordPress पेशेवर र विपक्ष
पन्थियन: गम्भीर वर्डप्रेस वा नयाँ अवशेषका साथ Drupal होस्टिंग